Inona no atao hoe Asterisk? Ny programa open IP IP loharano misokatra | Avy amin'ny Linux
Inona no atao hoe Asterisk? Ny programa open source IP telephony
Azo antoka fa manontany tena ianao inona marina ny Asterisk. Ity tetikasa loharanom-baovao misokatra ity izay resahin'ireo orinasa sasany amin'ny habe rehetra, ary koa ireo masoivohom-panjakana sasany sy ivon-toerana hiantsoana ireo mpampita vaovao.
Ary ny marina, ny lazany dia miorina tanteraka, vao mainka koa amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana, satria afaka mandray anjara izy tombontsoa maro tsy misy antony, satria loharano malalaka sy misokatra tanteraka.
1 Inona no atao hoe IP PBX?
2 Inona no atao hoe Asterisk?
2.1 Fa maninona no sehatra voalohany eto an-tany?
3 Ahoana no ahafahan'ny Asterisk manampy ny orinasanao?
3.1 Tombontsoa asterisk
Inona no atao hoe IP PBX?
Alohan'ny hanombohako hanazava ny atao hoe Asterisk ary inona izany, tokony ho fantatrao aloha inona no atao hoe switchboard an-tariby raha mbola tsy hainao. Ny switchboard dia tsy inona fa ny andiana fitaovana / rindrambaiko rindrambaiko mba hampifantoka ny telefaona rehetra amin'ny birao, tranobe na faritra iray, mametraka fifandraisana amin'ireo mpampiasa samihafa.
Amin'ny tranga manondro a IP switchboardMitovy tsotra io, fa hampiasa tambajotra LAN sy WAN, amin'ny fampiasana protokol IP hanaovana fifandraisana. Izany hoe raha tokony hampiasa tambajotram-pifandraisana nentim-paharazana dia ampiasaina amin'ny Internet ny serivisy VoIP.
Azo antoka fa voatery antso Mihoatra ny indray mandeha any amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana, serivisy ara-pahasalamana, na orinasa, izay nampiandrasan'izy ireo anao raha nisy masoivoho afaka nanampy anao. Na mety efa novalianao fanontaniana vitsivitsy tamin'ny mpanampy virtoaly iray izay nampita anao tany amin'ny sampana mety mifanaraka amin'ny filanao. Ary io rafitra io dia switchboard an-tarobia ...
Inona no atao hoe Asterisk?
Asterisk dia lozisialy maimaim-poana sy malalaka misokatra natao hamoronana rindranasa fifandraisana, toy ny rafitra telephony IP, VoIP Gateways, mpizara fihaonambe, ary vahaolana hafa namboarina ho an'ny orinasanao na fikambanana. Izany no antony ampiasain'ny masoivoho, governemanta ary orinasa maro.
Eo am-pandrosoana tsy tapaka izy io, noho izany dia tetik'asa tena velona izy io miaraka amin'ny fanavaozana sy fanamboarana tsy tapaka. Noho izany rehetra izany dia nametraka ny tenany ho iray amin'ireo motera lehibe an'ny PBX mifototra amin'ny IP manerantany izy.
Na dia noforonina ho rindrambaiko switchboard aza izy tamin'ny voalohany dia nampiana singa ilaina hafa taty aoriana mba hanao rafitra fifandraisana feno sy matanjaka. Inona koa, Asterisk dia azo ovaina, iray amin'ireo tanjaka hafa raha mikasa ny hampifanaraka azy amin'ireo sokajy isan-karazany amin'ny habe ianao. Manomboka amin'ny SME izay mila zavatra tsotra handrindrana ireo antso miditra sy mivoaka, hatrany amin'ireo Ivotoerana fiantsoana sarotra indrindra.
Tsy toy ny rafi-telefaona nentim-paharazana, tsy mila manavao ny fametrahana fitaovana maharitra. Ho fanampin'izay, tompon'andraikitra amin'ny fampidirana fanatsarana isan-taona ny mpamorona azy ireo ka mila fikojakojana kely indrindra ny rafitra ary milamina araka izay tratra.
Fa maninona no sehatra voalohany eto an-tany?
Asterisk dia tsy sehatra rehetra, iray amin'ireo mpitarika araka ny efa noresahiko. Io dia ahafahanao mamorona tabilao mifototra amin'ity tetikasa ity ary miasa tanteraka izy io. Manana koa endri-javatra izay miavaka raha ampitahaina amin'ny serivisy mitovy amin'izany:
Fandraisana fandraisam-peo miantso mandeha ho azy na an-tariby, miaraka amina fiasa voicemail mandroso.
Ny fahafahan'ny agents eo an-toerana sy lavitra mametraka ny ivon-toeran'ny mpanjifany na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta.
Mpanotrona mandeha ho azy amin'ny fandraisana sy fitantanana ireo antso ho avy.
Rafitra ahafahana manao sy mitantana ny laharana antso an-tariby eo anelanelan'ny agents misy, mametraka ny mpanjifa hitazona azy ireo ary mitazona azy ireo hitazona.
Azo antoka fa iray safidy tsara ho an'ny 3CX raha ny rafitry ny telefaona PBX.
Fanazavana fanampiny - Tranonkala ofisialy asterisk
Ahoana no ahafahan'ny Asterisk manampy ny orinasanao?
Asterisk teknolojia tena mahaliana ho an'ny orinasa izy io, na dia miasa tena aza ianao. Mbola bebe kokoa aza amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana, satria afaka manome tombony maro anao izy hifanaraka amin'ny toe-javatra vaovao ary hanohy hiasa ara-dalàna. Amin'izany no ahafahanao manova ny PC-nao ho mpizara serasera VoIP be pitsiny hanamorana ny fanampiana an-tariby ataon'ny mpanjifanao.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny Asterisk dia ampiasaina amin'ny karazana orinasa sy orinasa rehetra. Avy amin'ny freelancer sasany izay efa mampiasa ny switchboard IP, ho an'ireo orinasa lehibe toa an'i IBM, Google, governemanta sns. Raha ny marina dia efa manana anjara 18% izy satria loharano misokatra, maimaimpoana ary matanjaka be.
Ny asterisk dia iray amin'ireo rafitra manana fiasa bebe kokoa, azo ovaina ary iray amin'ireo manome fitoniana bebe kokoa. Ary, ny tsara indrindra, azo ampiasaina izy io sehatra samihafa: GNU / Linux, macOS, BSD, ary Windows.
Rehefa miresaka a Fifanakalozana telefaona IP, na IP PBX, dia manondro telefaona SIP iray na maromaro (client) ary mpizara iray izay azonao apetraka amin'ny Asterisk amin'ny PC-nao. Izany hoe ny rafitra dia hanana ireo faritra roa ireo, amin'ny lafiny iray ny rindrambaiko ary amin'ny lafiny hafa ny terminal.
Amin'izay mba? Tsotra, tena tsotra, amin'ity fomba ity dia afaka manao antso anaty ianao amin'ny alàlan'ny a lahatahiry telefaona / mpampiasa eo amin'ny tambajotra anatiny, na koa miantso antso ivelany amin'ny alàlan'ny VoIP. Amin'izany no ahafahanao manangana ny ivon-telefaonanao manokana hanompoana ny mpanjifanao, hizara ny antso ho avy amin'ny sampana na mpiasa, sns.
ny tombony an'ity rafitra napetrak'i Astreisk ity dia:
Te hanamora ny fametrahana sy ny fametrahana amin'ny takelaka findainao manokana, satria ampiasain'ny rindrambaiko, fa tsy ny rafitra fikirakirana lafo sy sarotra.
Asterisk koa mamela a fitantanana mora noho ny interface tsotra sy intuitive.
Mitahiry vola lehibe amin'ny alàlan'ny fampiasana telefaona VoIP fa tsy mila fifanarahana serivisy telefaona mahazatra mahazatra izay lafo matetika ny antso lavitra na iraisam-pirenena.
Tsy mila manisy fanovana ao an-tranonao ianao, amin'ny toeranao vaovao amin'ny fifandraisan-davitra, na any amin'ny biraonao, nanomboka teo tsy mila tariby manokana.
Ny hoe scalable, ho azonao atao ny manampy ny mpanjifa (telefaona) mba ho maro ny sampana na mpandraharaha hanatevin-daharana ny tambajotra fanampiana.
Satria manamora kokoa ny asanao izany ary mamela anao handefa antso, alefa any amin'ny mpandraharaha izay maimaim-poana amin'ny fotoana rehetra, sns., Hamonjy anao amin'ny famindrana tanana ilay antso sy hanatsara be ny famokarana izany.
Asterisk dia mamela ny fampiasana telefaona SIP, izay manatsara ny ny fiasa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Inona no atao hoe Asterisk? Ny programa open source IP telephony
Ny mpanoratra Libreboot dia tonga niaro an'i Stallman satria ny sasany manohy miala amin'ny FOSS